ondana volon'ondry "perla varahina" - Moy Mili
Home > ondana volon'ondry "perla varahina"
ondana volon'ondry "perla varahina"
Ny ondana vita amin'ny Velvet Moi Mili dia soso-kevitra ho an'ny haingo ny tranonao. Izy ireo dia fidirana am-boalohany ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, amin'ny haingoana seza na rattan seza. Ny ondana dia namboarina matevina ary voakapa avy amin'ny lamba volondana avo lenta amin'ny loko varahina. Ny lamba marevaka dia hampisy rivo-piainana boho ao anatiny, ho tsara tarehy ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny sy misy retro. Ny loko volamena dia mandeha tsara miaraka amin'ny fandaharana marobe, teboka eo ambony izany ary amin'ny haingo. Hamorona famoronana tantara foronina ao amin'ny efitran'ny zanakao izy. Mamporisika anao izahay hamorona andian-ondana maromaro, toa majika izany.
Lamba: 95% polyester, 5% elastane, 330 g